I-Onollo: Ukuphathwa Kwemidiya Yezenhlalo ye-Ecommerce | Martech Zone
Inkampani yami ibilokhu isiza amakhasimende ambalwa ngokuwasebenzisa nangokwandisa lawo Thenga imizamo yokumaketha eminyakeni embalwa edlule. Ngoba i-Shopify ine-sharehare enkulu embonini ye-e-commerce, uzothola ukuthi kukhona ithoni lokuhlanganiswa okukhiqizwayo okwenza impilo ibe lula kubathengisi.
Ukuthengiswa kwezentengiselwano yezenhlalo yase-US kuzokhula ngaphezu kuka-35% ukudlula u- $ 36 billion ngo-2021.
Ukukhula kwezentengiselwano yezenhlalo kuyinhlanganisela yezinhlelo zezinqola ezihlanganisiwe ezinkundla zokuxhumana ezihlanganisa kanjalo nokuziphatha komthengi okushintsha kakhulu onyakeni odlule. Unalokho engqondweni, izinkampani ze-e-commerce zingahle zifise ukwabelana nokwazisa ngomkhiqizo wazo nemikhankaso yazo kube lula. Amasistimu wokuphathwa kwemidiya yezenhlalo awavamise ukuhlanganiswa ukuze kuthathwe futhi kulandelwe uhlu lwakho nokuthengisa ngemithombo yezokuxhumana… kuze kube manje.
Onollo: Hlela futhi Lungiselela Okuthunyelwe Komnotho Komphakathi
Nayi ividiyo enhle yokubuka konke:
U-Onollo unikeza ipulatifomu yokuphatha imidiya yezokuxhumana ehlakaniphile, ehlanganiswe kahle yezidingo zakho ze-e-commerce, kufaka phakathi:
Ukuhlanganiswa Kwe-ecommerce - Ukuhlanganiswa okukhiqiziwe nge Thenga, Magento, WooCommerce, Futhi Bgcommerce.
Ukuthunyelwa komkhiqizo - Finyelela, hlela, futhi ushicilele idatha yakho yekhathalogi yomkhiqizo ngokuchofoza okumbalwa. U-Onollo ukhipha idatha yomkhiqizo esitolo sakho ngokuchofoza okukodwa nje. Ungakha ukuthunyelwa komkhiqizo wokuxhumana nomphakathi ngaphandle kokulanda okuyisidina kwezithombe, ukukopisha-ukunamathisela amagama womkhiqizo, izincazelo, amanani, ama-URL, njalonjalo. Shayela traffic organic for free. Tshela umhlaba ukuthi uthengisani.
Ikhalenda Lomphakathi - Dala okuthunyelwe kokuxhumana nomphakathi kwanoma yiluphi uhlobo ngokusebenzisa idatha yomkhiqizo esitolo sakho. Hlela futhi ulandelele konke okuthunyelwe yimidiya yokuxhumana nabantu ekhalendeni le-Onollo.
Ukuhlela Okuhlakaniphile - I-algorithm ye-AI ephathelene ne-Onollo incoma isikhathi esihle sokuthunyelwe kwakho okulandelayo. Akusekho ukuqagela. Imithombo yezokuxhumana kufanele ibe lula.
I-Autopilot (Isici Somlingo) - Gcina ukuthumela ngenkathi uphumule. I-Autopilot izokhetha futhi ishicilele okuqukethwe okufanele ngesikhathi esifanele kuwo wonke amanethiwekhi wakho wezokuxhumana.
Bhalisela i-akhawunti yamahhala ye-Onollo
Tags: AmazonI-BigCommerceeBayFacebookgoogleLinkedInMagentoluthoPinterestthengasocial mediai-autopost yezokuxhumanaikhalenda yezokuxhumanaukuphathwa kwezokuxhumana nabantuukuhlela ezokuxhumTikTokTwitterWishWixWooCommerce